ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့သားသားမီးမီးတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာ....
Home Lotaya ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့သားသားမီးမီးတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာ….
ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့သားသားမီးမီးတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာ….
ချစ်မေမေတို့ရေ…။ အိမ်တွင်းရေးသာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုရင် ချစ်မေမေတို့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းပါစေ၊ မမှုနိုင်ဘူး မဟုတ်လား။
ဒီလိုမျိုး အေးချမ်းတဲ့ဘဝကြောင့် ချစ်ဖေဖေတို့ကလည်း အပြင်မှာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ စီးပွားရှာလို့ရပြီး အရာအားလုံးက အဆင်ပြေနေမှာပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်မေမေတို့အားလုံးအတွက် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးတစ်ခု တည်ဆောက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
၁။ ချစ်မေမေနဲ့ချစ်ဖေဖေတို့က အစစအရာရာအဆင်ပြေနေပါစေ။
ချစ်မေမေနဲ့ချစ်ဖေဖေတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက အမြဲတမ်း သာယာအေးချမ်းနေမယ်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်း ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုရင် သားသားမီးမီးတို့လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရမှာပါ။ နောက်ပြီး မိဘနှစ်ပါးရဲ့ အပြုအမူတွေကို လိုက်နာအတုယူပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သားသားမီးမီးတို့အတွက် ချစ်မေမေတို့ နှစ်ယောက်က အချိန်သီးသန့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့မိသားစုတွေမှာ ချစ်ဖေဖေရော၊ ချစ်မေမေရော နှစ်ယောက်လုံး အလုပ်ထွက်လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာလည်း သားသားမီးမီးတို့ကို ဂရုစိုက်ဖို့၊ သီးသန့်အချိန်ပေးဖို့ မပျက်ကွက်ပါနဲ့။ မိဘတွေမအားတာကို သားသားမီးမီးလေးတွေက နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုလည်း ပြန်ပြီးငဲ့ကွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
၃။ စိတ်ညစ်စရာတွေကို ပုံမချပါနဲ့။
ဘယ်လိုစိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေပဲရှိရှိ၊ ချစ်ဖေဖေနဲ့ ချစ်မေမေတို့က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်ပုံချတာမျိုး လုံးဝမလုပ်ရပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးက သားသားမီးမီးတို့ဆီ အပြစ်ပုံချတာမျိုး လုံးဝလုံးဝမလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာက မိသားစုဝင်အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ဒဏ်ရာရစေပြီး အိမ်တွင်းရေးအခြေအနေကို ဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ကို ဂရုစိုက်သလိုမျိုး ချစ်ဖေဖေနဲ့ချစ်မေမေတို့ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ သားသားမီးမီးတို့ကို နေကောင်းကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်ရင်း ချစ်မေမေတို့နှစ်ယောက်က မကျန်းမမာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သားသားမီးမီးတို့လည်း ဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်ပါ့မလဲ။ အဲ့ဒီတော့ အရာအားလုံးကို ဘက်တူညီတူ ဂရုစိုက်ကြပါ။ ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့် ချစ်မေမေတို့က သေချာပေါက်ကျန်းမာနေမှ သားသားမီးမီးတို့ကို အကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောင်နိုင်မှာပါနော်။
ချစ်မေမေတို့ရေ…။ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုရင် တည်ထောင်ပြီးတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ငြိမ်သာယာအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာကလည်း ပိုလို့တောင် ခက်ပါသေးတယ်နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း သားသားမီးမီးတို့နဲ့အတူ သာယာခိုင်မာတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ချစ်မေမေတို့အပြင် ချစ်ဖေဖေတို့အတွက်ပါ အခုလိုပဲ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Source: parents, youaremom, raisingchildren
Previous articleအတွေးအခေါ်မြင့်မားတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Next articleကလေးဘဝမှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (Personality) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု
သားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်လို Potty Train ပေးမလဲ?